अनुकूलित लिफ्टिंग निलंबित टोकरी को लागि hoist - Buildinglift.com
होस्ट, निलम्बित प्लेटफर्मको कुञ्जी भागको रूपमा, काम गर्ने प्लेटफार्मको शक्ति तंत्र हो।
उचाइले विद्युतीय चुम्बकीय ब्रेक तीन-चरण असीकोनस मोटर ड्राइभिङलाई स्वीकार्छ, तार रियरको गति र जोडाको गियरको जोडी पछि पछाडि तार तार रस्सी टेलिभिजन चलाउँछ। तार रस्सी भेला गर्ने तंत्र मुख्य रूप देखि ड्राइभिङ्ग पहिए र ग्रोइड आन्तरिक गियर को एक जोडा हो।
LTD63 <D50 कार्यान्वयन प्रक्रिया सुधार्दै: काम गर्ने तार रस्सीले "α" घुमाईको आकार देखाउँछ जुन "ग" ग्रोइड आन्तरिक गियरको आकारमा। "वी" आकार नाली को दुई पक्षहरु बीच घर्षणमा हावा काम गरेर तार रस्सी साथ उठ्ने माथि र तल बनाउनुहोस्।
LTD80 कार्यशील सिद्धान्त प्रवाह गर्दै: कामदार तार रस्सीले "एस" घुमाईको आकार देखाउँछ जुन "घ" आन्तरिक गियरको आकार "भो" मा छ।
मोडेल नम्बर LTD80 LTD63 LTD50
मूल्याङ्कन लिफ्टिंग क्षमता (KN) 8 6.3 5
लिफ्ट गति (एम / मिनेट) 8.3 9.0 9.0
वजन (किलोग्राम) 50 46 41
पावर (केडीई) 2.2 1.5 1.1
भोल्टेज (V) 380 380 380
इस्पात तार रस्सी व्यास (मिमी) 8.6 8.3 8.3
मोटर हर्ट्ज (हर्ट) 50 50 50
ब्रेकिंग टोकक (एनएम) 15.2 15.2 15.2
गति (आर / मिनेट) 1420 1400 1400
1. क्यू: तपाईं एक निर्माता हो या व्यापारिक कम्पनी हो?
A: हामी धेरै वर्ष उत्पादन अनुभव निर्माता हो।
प्रश्न: तपाइँ कस्तो प्रकारको भुक्तानी अवधि स्वीकार गर्नुहुन्छ?
A: हामी TT र LC दुवै स्वीकार गर्छौं।
3. प्रश्न: तपाईं उत्पादनको समयमा कुन इस्पात सामग्री प्रयोग गर्नुहुन्छ?
A: इस्पात Q195, Q235, Q345।
4 प्रश्न: तपाईं कसरी उत्पादनको गुणको ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ?
सबै उत्पादहरू विश्वसनीय विक्रेताओंबाट उच्च गुणस्तरको सामग्री बनाइएका छन्।
सबै उत्पादनहरू निर्माणको प्रक्रियामा सख्त परीक्षणहरू हुनुपर्दछ।
डट कम गर्नु अघि हाम्रो क्यूसी द्वारा सख्त निरीक्षण गरिनेछ।
5 प्रश्न: तपाईंको तहको असर क्षमता कसरी हो?
A: यो किस प्रकार को मचान, आकार र तपाईंको सेटअप मा निर्भर गर्दछ। हाम्रो सबै मचान र सामानले आवश्यक परीक्षण पार गर्यो।
6 प्रश्न: तपाईंको घाँटी कसरी पुग्न सक्छ?
A: साधारणतया, हामी मचान अधिकतम 30 मीटर सम्म सेटअप गर्न सुझाव दिन्छौं। तर हाम्रा केही ग्राहकहरूले हाम्रो मचानलाई 60 मिटरसम्म सेटअप गर्छन्। सुरक्षा कागजातहरूको अनुसार, हामीले प्रत्येक 20 मीटरमा इस्पात प्लेटफार्म सेटअप गर्न आवश्यक छ जहाँ मचान सेटअप निरन्तर रूपमा गर्न सकिन्छ।
7. क्यू: जीवन तपाईंको पर्दाको बारेमा कसरी हो?
A: यो तपाइँ कसरी यसको प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाइँ यसलाई कसरी भण्डारण गर्नुहुन्छ निर्भर गर्दछ। सामान्यतः, हाम्रो तहको जीवन 5-7 वर्ष हो।
मोडेल संख्या: एचएक्स-064
उपयोग: निलम्बित प्लेटफार्म
अधिकतम लिफ्ट वजन: 1000 किग्रा
अधिकतम लिफ्टिंग: 120m
लिफ्ट गति: नियन्त्रण
प्रमाणन: सीईओ आईएसओ, ISO 9001
सामाग्री: एल्यूमीनियम मैग्नीशियम मिश्र धातु
प्रकार: निलम्बित कार्य प्लेटफार्म उपकरण
उत्पादनको नाम: प्लेटफार्म लिफ्टिंग लिस्ट
कुञ्जी शब्द: उच्च उचाई कार्य गर्दै
निलम्बित प्लेटफार्म चीन, निलम्बित कार्य प्लेटफार्म निर्माता